A Complete Ndepụta nke 50 Music Sites ka iyi Music Online
Music dị ka sizinin ka ndụ anyị. Ma n'oge ahụ, ndị mmadụ na-enuba ha online ozugbo. Ka na-achọ gburugburu n'ihi na oké music saịtị na-ege ntị music online? Ebe a bụ onye-nkwụsị isiokwu na-enye gị 50 music saịtị na i nwere ike ịgbalị ha ịchọta ndị kasị mma ọrụ gị. Iji nke saịtị ndị a na-kpebisiri ike site ya na saịtị ewu ewu, nke a na-ekere ke Alexa n'usoro.
E Nwere Mobile Platform: Android, iOS
Captivate na tụsaratụ onwe gị na-ege ntị ndị a jụụ music na songs na Google play music ike na-enye gị. Ị nwere ike nweta jụụ na Kacha ọhụrụ songs site na ịga na Google Play Music.
Gaa saịtị a >>
E Nwere Mobile Platform: Android, iOS, Windows ekwentị
Ike onwe gị na-ege ntị ma na-jụụ music na songs site na ịga na YouTube. Ị nwere ike ele ndị niile na coolest vidio egwú, na dị iche iche Genres nke songs. Ị ga-n'ezie n'anya ileta YouTube.
Yahoo bụghị naanị na ọ na-enye gị ozi na ị chọrọ, ọ pụkwara nye gị ezi songs na dị iche iche Genres nke music. Na-ege ntị dị iche iche Genres nke music nwere ike maa mee ka uche gị na ka gị ahu zuru ike.
The SoundCloud ga-abụ n'ezie n'anya iji nye gị niile ọhụrụ, ndị agadi na niile oge mmasị songs na music. Ike onwe gị na-akụ na SoundCloud iji nweta niile ọkacha mmasị gị abụ site ọkacha mmasị gị na-ese.
Ị nwere a mmasị song na nka? Mgbe ahụ i kwesịrị akụ na Pandora, Pandora ga-adị ukwuu iji nye gị niile songs na music nke niile ọkacha mmasị gị nka na gbalaga.
Ẹnyene na tụsaratụ uche gị na ahu site na-ege ntị Deezer. The Deezer nwere ike maa nye gị niile songs na music na nwere ike ịtọ gị na ọnọdụ na a ezi ụzọ.
Amalite ụbọchị gị n'ọrụ, nri na mmụọ nsọ site na-ege ntị music awa site GrooveSark. The GrroveShark wpuld-abụ oké na-eme gị obi ụtọ site n'inye niile ọkacha mmasị gị songs.
Nịm gị mma na ọnọdụ site n'ige ntị na ịga MySpaceMusic. Ike onwe gị na ndị niile na jụụ na ezi music na ike dịtụ etinye ọnụ ọchị gị ihu. Ị ga-n'ezie n'anya na ịga online redio.
Na-akpali mmasị onwe gị na ihe ọma niile songs na dị iche iche Genres nke music site na ịga na Xbox Music. Ị ga-n'ezie hụrụ n'anya na-gaa na nke a online redio.
Ọ na-ele ka gị nọ n'eluigwe ọ bụrụ na ị nwee ike ịnụ ihe ọma niile songs na ị hụrụ n'anya site na ịga na Spotify. Nke a online redio na-enye gị ike na gị onwe gị playlist.
E Nwere Mobile Platform: Android, iOS, Windows ekwentị, Blackberry
Ka onwe gị ike gị music playlist site na Tunein. Akụ na ugbu a ka Tunein na-ege ntị niile songs na ike maa-eme ka ị amụmụ ọnụ ọchị. Ya mere, akụ na ugbu a na-enwe niile songs ị chọrọ ịnụ.
Ị n'anya music? Mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịga leta Last.fm na-ege ntị niile songs na music na ị chọrọ ịnụ. Ị wouls n'ezie n'anya Last.fm n'ihi na ọ nwere ike inye niile songs na nwere ike ịtọ gị na ọnọdụ n'ime ezi onye ahụ.
Na-ege ntị music awa site Bandcamp nwere ike maa-eme ka ị ọchị ma na-amalite ụbọchị gị. Ike onwe gị na-ege ntị ma na-ekiri niile music videos na ị hụrụ n'anya.
Ka ahụ gị na uche nwere okpukpu si mgbakasi mkpọtụ na inweta niile songs na music nwere ike ime ka ị na-eche zuru ike. Ị ga-akụ ya ndị billboard.
Ka onwe gị-enwe obi ụtọ na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na nka. The AllMusic nwere ike ike ka ị na-ege ntị na ike a playlist nke niile ọkacha mmasị gị songs.
E Nwere Mobile Platform: iOS
Ị bụ onye uchu ofufe nke dị iche iche Genres nke music? Mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịga leta Beatport ike gị online playlist nke niile ọkacha mmasị gị songs na music. Ị ga-n'ezie na-enwe a online redio Beatport.
Ike onwe gị na-vasatail na otú ị nwere ike ịmepụta gị playlist na iji jụụ iHeart. The iHeart nwere ike inye gị ike iji na-enwe niile ọkacha mmasị gị songs na music Genres.
Etinye a ọnụ ọchị gị n'obi na ihu site n'iji ya gee ntị na 8tracks. The 8tracks nwere ike maa-eme ka ị ọchị site n'inye gị ike ka gị onwe gị na playlist.
Iji Mixcloud pụrụ nnọọ ime ka gị na ọnọdụ na a nnọọ mma. Listen na-ele niile ọkacha mmasị gị songs na iji Mixcloud. Ị ga-n'ezie na-enwe na iji Mixcloud.
Ị n'anya n'ezie music? Mgbe ahụ ị ga akụ na na-eji SiriusXM. The SiriusXM ike dịtụ ike ka ị na ike gị playlist.
Nwere a okpukpu si gị na-agwụ ike na-agwụ ike ndụ kwa ụbọchị na-eme site n'aka nke na-eji Jango. The Jango nwere ike inye gị niile ọkacha mmasị gị songs na music.
Tinye na agba na nti ambiance gị ebe site n'ọnụ n'iji ya gee ntị na Rdio. Site na Rdio ị pụrụ inweta na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na music.
Ị chọrọ ime ka ambiance gị ebe a na nnọọ mma na ìhè n'ụzọ? Mgbe ahụ i kwesịrị akụ na DI.fm na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na music Genres.
Na-akpali mmasị na tụsaratụ onwe gị site n'ọnụ na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na music site na Shoutcast. Ị ga-n'ezie a n'anya online redio n'ihi na ọ nwere ike inye gị niile songs na ị n'anya n'ezie.
Amalite ụbọchị gị nri site n'ige ntị niile ọkacha mmasị gị songs na Genres nke music site na Live365. Ị ga-n'ezie na-enwe a online redio n'ihi na ọ na-enye ohere ọrụ ịkọrọ na biputere ya ma ọ bụ ya kasị amasị ya music.
Mee ka gị na ụbọchị a dị nnọọ mma ụbọchị site n'ige ntị niile ọkacha mmasị gị songs na music videos. Soro niile ọhụrụ songs nke ọkacha mmasị gị artists na ìgwè ndị agha site na Sogza.
# 27. The mama Machine
The Hyper Machine nwere ike maa-eme ka ị hyper na energetic. Ị ga-amalite ụbọchị gị ezi site n'iji ya gee ntị ka The Hyper Machine.
Ị ga-n'ezie-enwe Radio n'ihi na ọ bụ online redio na-enye ohere ọtụtụ ọrụ biputere ma na-eso ha mmasị songs na Genres nke music. Ndị na-music n'anya ga-abụ n'ezie a n'anya online redio.
Indulge onwe gị na ihe ọma niile songs na coolest music na ike n'ezie ime ka gị na ụbọchị zuru ezu. Zuru ike na tụsaratụ mgbe na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na iji Rhapsody.
The eMusic nwere ike maa etinye ọnụ ọchị gị n'obi na ihu n'ihi na ọ na-enye ohere ka ị na-na-eso niile songs na ike dịtụ eme gị obi ụtọ. Ndị hụrụ dị iche iche na ụdị na-Genres nke music ga-n'ezie n'anya na-eji eMusic.
-Emeso onwe gị na-ege ntị gị niile favosite songs na music site na Slacker.com. Nke a online redio na-enye ohere ọtụtụ ọrụ ike ha playlist na ịkọrọ ya ndị ọzọ.
Ị n'anya na-ege ntị dị iche iche Genres nke music mgbe ahụ i kwesịrị iji AOL Radio. Ọ bụ ihe na online redio na ike maa-ekwe ka ị na-eme ka gị onwe gị na playlist. Ị ga-n'ezie a n'anya online redio.
# 33. Gbagwojuru Music
Mgbe uche ndị ọhụrụ music na-emekarị. The gbagwojuru Music nwere ike maa inyere gị aka inwe track na ndị niile coolest na Kacha ọhụrụ songs na ị ga-n'ezie n'anya ịnụ.
Nwere nnọọ na-agwụ ike ụbọchị? Bụ'abụ na indulge onwe gị na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na nka site na online redio Stereomood. Nke a bụ ihe online redio na pụrụ nnọọ ime ka gị na ụbọchị zuru ezu.
Nwere a okpukpu si a na-agwụ ike ndụ kwa ụbọchị na-eme. Na-etinye ọnụ ọchị gị ihu site n'ige ntị niile ọkacha mmasị gị songs na nka. The Ex.fm bụ ihe online music-eweta na online redio na ike dịtụ nye gị niile songs na ị chọrọ ịnụ.
Tụsaratụ ma zuru ike site n'ige ntị niile ọkacha mmasị gị songs ma na-ekiri jụụ music vidiyo site na iji MOG. The MOG nwere ike maa mee ka ụbọchị gị ziri ezi. Ọ bụrụ na ị bụ onye na music n'anya mgbe ahụ i kwesịrị iji MOG.
Ị na owu na-ama na Ịnọ nkịtị gwụrụ? Bilie na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na iji RadioTuna. The RadioTuna bụ ihe online redio na music eweta na-enye ohere onye ọrụ na-ike ha playlist.
E Nwere Mobile Platform: N / A
Soro na mgbe ọnwụ track ka ọhụrụ na coolest songs. Ị ga-brighten ụbọchị gị site na ịga na Blip.fm. The Blip.fm ike dịtụ nye gị mmelite banyere Kacha ọhụrụ songs nke ọkacha mmasị gị nka na gbalaga.
Ị dị ka na-eme ka gị onwe gị na playlist? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-eji Playlist.com na-ege ntị ma na-mmelite banyere ndị ọhụrụ na songs na music videos na ị chọrọ inwe.
# 40. Nke a bụ My Jam
Jam na Nke a bụ My Jam. Ike onwe gị ma na-update banyere ndị ọhụrụ na songs nke ọkacha mmasị gị nka na gbalaga. Ị ga-n'ezie n'anya na ịga na Nke a bụ My Jam.
Na-etinye ezi ụda na ndụ gị site n'iji ya gee ntị na beemp3. The beemp3 ike dịtụ nye gị niile songs na ezi music na ị chọrọ inweta. Ya mere, nke na ị bụ onye music n'anya mgbe ahụ i kwesịrị ileta beemp3.
E Nwere Mobile Platform:
Get Entertainment na indulgement site na ịga na 22Tracks. Site na ịga na 22Tracks mgbe ahụ ị nwere ike nweta ọhụrụ mmelite banyere ọhụrụ songs nke ọkacha mmasị gị mmachi na-ese.
Enweta ụtọ ma zuru ike gị onwe gị site na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs. Site na ịga na Shuffler.fm ị nwere ike nweta niile ọkacha mmasị gị songs na ike gị onwe gị playlist.
Merie umengwụ na mmetụta gbụrụ site na ịga na Whyd. Site n'ọnụ na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na music i nwere ike indulge onwe gị. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie n'anya na iji Whyd.
Achọpụta na ịdị mma na inweta ntụrụndụ site na ịga na Musicovery.com. The Musicovery.com nwere ike maa nye gị niile ọkacha mmasị gị songs ma na-mmelite banyere ọkacha mmasị gị artists.
Sinụ mmetụta owu na-ama na Ịnọ nkịtị gwụrụ. -Emeso onwe gị na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na dị iche iche Genres nke music na iji FrateMusic. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na ike ha listi ọkpụkpọ.
Ị ga-owu na-ama na Ịnọ nkịtị gwụrụ ma ọ bụrụ na ị na-eji TheSixtyOne. Ị nwere ike n'ezie inweta obi ụtọ site n'ọnụ-eji nke a online redio. Ọ nwere ike na-enye gị mmelite banyere ọkacha mmasị gị songs na nka.
E Nwere Mobile Platform: Android, iOS, Windows ekwentị, Symbian
Ọkacha mmasị gị songs na-dị nnọọ eche gị. Ị nwere ike ẹnyene onwe gị site n'aka nke na-eji Aupeo. The Aupeo nwere ike maa ịnọkọrịta site n'inye gị ike iji na-eme ka ntị ọkacha mmasị gị songs.
Enweta ọhụrụ mmelite banyere ọkacha mmasị gị songs site na WiMP. The WiMP ike dịtụ-enyere gị aka inweta niile ọkacha mmasị gị songs. Ndị na-music n'anya kwesịrị iji nke a WiMP.
Na-onwe gị n'ike mmụọ nsọ ma na-akwali-ege ntị ọkacha mmasị gị songs na music Genres. The MP3songs nwere ike n'ezie nye gị niile songs na ị chọrọ iji nweta for free.
> Resource> Music> Top 50 Music Sites ka iyi Music Online